प्रविधि/समाचार/२०१८/३१ - Meta
This page isatranslated version of the page Tech/News/2018/31 and the translation is 100% complete.
previous 2018, week 31 (Monday 30 July 2018) next
Special:Log को डिजाइन परिवर्तन गरियो । यो फेरि चाँडै बदलिने छ। विकासकर्ताहरू समस्या समाधान गर्ने काम गर्दैछन् । 
1.32.0-wmf.13 संस्करणको उपयोग आंशिक रूपमा ढिलाइ गरिएको छ । सबै उपयोगहरू बग समाधान पछि पुन: निरन्तरता दिइयो र सफलतापूर्वक समापन गरियो । 
1.32.0-wmf.14 संस्करणको उपयोग आंशिक रूपमा ढिलाइ गरिएको छ । 
मिडियाविकीको नयाँ संस्करण परीक्षण विकीहरू र MediaWiki.orgमा ३१ जुलाई देखि लागू हुनेछ । यो केही गैह्र विकिपिडिया विकीहरूमा १ अगस्ट देखि लागू हुनेछ । यो सबै विकीहरूमा २ अगस्ट (क्यालेन्डर) देखि लागू हुनेछ ।
अब अर्को बैठक सम्पादन समूहसँग गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईँले बैठकमा विकासकर्ताहरूलाई कुन बगहरू बढी महत्वपूर्ण छन् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। बैठक ३१ जुलाई at 19:30 (UTC) मा हुने छ। कसरी सहभागी हुने हेर्नुहोस् ।
IRC मा तपाईँले प्राविधिक सल्लाह बैठकमा सहभागी हुनसक्नुहुन्छ । बैठकमा स्वयंसेवी विकासकर्ताहरूले सल्लाह माग्न सक्नेछन् । The meeting will be on १ अगस्ट at 15:00 (UTC) as well as at 23:00 (UTC). कसरी सहभागीहुने हेर्नुहोस् ।
समादायमा छलफल पछि, नयाँ प्रयोगकर्ता समूह सिर्जना गरिने छ । "इन्टरफेस एडमिनिस्ट्रेटर" हरू मात्र यस्ता प्रयोगकर्ता हुनेछन् जसले MediaWiki:Common.css र MediaWiki:Common.js जस्ता पृष्ठहरू सम्पादन गर्न सक्नेछन् । यो प्राविधिक समस्याहरू समाधान गर्न र सुरक्षा सुधार गर्नको लागि हो । यो परिवर्तन २०१७ अगस्ट अन्त सम्ममा लागू हुने छ ।
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Tech/News/2018/31/ne&oldid=19207594"
Last edited on 17 July 2019, at 02:57